Buluugle Somali Information Service
Muqdisho oo laga Qaadayo isbaarooyinka dhantaalay isku socodka gaadiidka magaalada
Buluugleey, Juun 4, 2005
Ra’iisal Wasaare Ku xigeenka Dowlada KMG ahna Wasiirka Warfaafinta Maxmuud Jaamac (Sifir) ayaa maanta shaaca ka qaaday go’aan ay si wadajir ah u gaareen xildhibannada labada gole ee ku sugan magaalada Muqdisho. Wasiirka Warfafinta Maxamuud Jaamac ayaa jaraa’dka u sheegay in shirkaas uu gudoominayay Mudane Shariif Xasan oo ah gudoomiyaha baarlamaanka KMG. Waxaa shirkaas lagu go’aamiyay in dhamaan isbarooyinka ha noqoto mid guurta ama mid degan intuba laga qaaadi doono magaala madaxda Muqdisho bishan aan ku jirno Juun 7deeda oo ku began maalinta talaadada.
Dadweynaha ku dhaqan degaanka Gobolka Banaadir ayaa dhib weyn ku qabay isbaarooyinka kala gooyey isku socodka gaadiidka magaada Muqdisho iyo nawaaxigeeda. Waxey ummadda Soomaaliyeed go’aankaan u arakaan inuu yahay talaabo qeyb weyn ka qaadaneysa sugida amaanka magaalo madaxda dalka.
Isbaarooyinka oo ka mid ah dhaqan xumada ka dhalatay qaran-jabka ku dhacay ummadda Soomaaliyeed, ayaa intooda badan waxaa iska leh ama maalgeliya dagaal oogayaalka iyo ganacsatada, waana xirfada ugu dakhliga badan intii Soomaaliya ay dowlad la’anta ahayd. Himilada ugu weyn ee loo qabo go'aankaas waxaa ugu culus garashada qabqablayaasha dagaalka ay ku waano qaadanayaan in isbaaradu tahay caqabad salka ku haysa qaskaka iyo xasilooni la’aanta, lidna ku ah nidaamka dawladnimada iyo kala dambaynta.